Qeybta 1:? Waa maxay file RTMP ah
Qeybta 2: Sida loo Play RTMP Faylal ay la VLC Media a Player on Windows?
Qeybta 3: Sida loo Play RTMP Faylal ay la VLC Media a Player on Mac?
Qeybta 4: Maxaad VLC ma ciyaari karo qaar ka mid ah RTMP files?
Qaybta 1: Waa maxay file RTMP ah?
RTMP, oo waxay u taagan tahay Real Time Media Protocol, waa kordhinta file isticmaalaan Macromedia ee Flash . Dhab ahaantii, marka aan qoto dheer uu laaban asalka, waanu heli doonaa in fariimaha Real-Time ee Protocol (RTMP) waxaa dhab ahaan loogu talagalay gudbinta-waxqabadka sare ee video, audio iyo macluumaadka u dhexeeya Adobe Flash Platform teknoolajiyada, oo ay ku jiraan Adobe Flash Player iyo Adobe AIR.
Si kastaba ha ahaatee, RTMP hadda laga heli karaa sida faahfaahinta furan si loo abuuro alaabta iyo technology oo sidaas awood gaarsiinta audio , video iyo xogta ee AMF furan, Jabbuuti , FLV qaabab, iyo F4V. Illaa iyo hadda, VLC Media Player 2.1 iyo wixii ka sareeya uu leeyahay taageerada qayb ahaan u ciyaaro durdurrada RTMP (ma RTMPE), halka Adobe Flash Player (web browser fur-in) waa RTMP macmiilka ugu weyn loo qaatay, taas oo ay taageertaa loo maqli karo ee audio iyo video huleeshay ka server RTMP.
Dhab ahaantii, VLC Player, taas oo ahayd markii loogu talagalay, ma uu lahayn awood u ciyaaro RTMP Files. Wixii version ilaa 1.1 ama wax VLC Player ayaa awoodi waayay inuu ciyaaro RTMP Files. Laakiin, markii version cusub ee soo galay suuqa, Player VLC ka mid ahaa inuu u ciyaaro, kuwaas oo RTMP Files.
Versions of Recent ciyaaryahankaan aan aadka u isticmaalno, waa awood ku filan oo ay ku ciyaari qaabab kala duwan ee files iyo si fudud u sii qulquli karo Macromedia RTMP Flash files maamuuska. Iyada oo kaliya macluumaadka ee URL, VLC ka Player noqon karaan kuwo wax ku ool ah loo isticmaalo ujeedo u ciyaaro RTMP Files. Waa in aad isticmaasho il Network isla ujeeddadaas.
Open VLC, Riix doorasho Menu ka heli karaa dhinaca bidix.
Waa kuwan tallaabooyinku, maareynta habboon faylasha RTMP la Media VLC ka Player daaqadaha.
Markaas guji Network Open Stream, ka dibna ku dhaji URL ee video aad rabto inaad ka ciyaaro VLC Media Player.
Textbox ayaa sharxaya oo taasuna waa la heli karo, taas oo si cad u muujinaysaa "Fadlan qor URL shabakad" doorasho.
Markaas riix badhanka Play iyo aad samaysay. Ku raaxayso video la VLC Player.
The snapshots sharxaya isku mid loo isticmaali karaa si isku mid ah looga barto.
Geedi socodka la mid ah sida ku xusan qaybta Windows ka socda la MAC ah. Iyada oo hab la mid ah, Player VLC la dacwayn karaa inuu ka ciyaaro Files RTMP ama RTSP Files. Just guji doorasho geeyo xaadirka ah ee menu Warbaahinta. Markaas qaybta file muuqan doona meesha aad u baahan tahay in faylka ku darto. Marka intaa raaciyay faylka, waxaa loo baahan yahay in aad ku darto url shabakadda, jooga in doorasho ee soo socda oo ku dul ku daray URL shabakaddan, guji qayb webigu. Waxaad la sameeyo la-socodka iyo waxa aad ka arki doona faylasha aad socda ee VLC Media Player on MAC. Geedi socodka u ciyaaro waa isku mid sida in daaqadaha.
Qeybta 4: Maxaad VLC ma ciyaari karo qaar ka mid ah files RTMP?
Waxaa jira marar qaar ka mid ah, marka Files RTMP ma ciyaaro VLC Media Player. Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah sababaha ii cad u la mid ah, oo iyaga ka mid ah baahida loo qabo in macluumaadka codec sax ah waa mid ka mid ah kuwa muhiim ah. Mararka qaarkood, ay sabab u tahay qalad geeyo shabakada, waxaad dareemi karaan dhibaato ka ciyaaro File RTMP ah. Xaaladdan oo kale, sirta ee aan karti webigu, geeddi-socodka oo ka mid ah ciyaaraha ee faylka suurtogal ma aha xitaa la Media VLC ka Player. Mararka qaar, arrimaha waafaqsan yihiin oo kaliya sabab kale oo qaar ka mid ah RTMP Faylal ay ku VLC Media Player aan ciyaaro. Dhinacyada arrimaha sugida kuwaan iyo arrimaha ammaanka inta lagu guda jiro geeddi-socodka geeyo waxaa ka mid ah sababaha kale ee la mid ah. Macaamiisha Xadidaada iyo xitaa Feed URL khaldan yihiin qaar ka mid ah sababaha uu ku darida ee VLC Player socda Files RTMP ah.
Xaaladdan oo kale, waxaa jira faylasha qaar, taas oo xataa ka dib markii in badan oo dadaal ha ciyaaro VLC Player, waxa la joogaa wakhtigii si ay u isticmaalaan Wondershare Video Converter Ultimate waa Kaaliyaha ugu fiican VLC. Qalab, waxaa loo isticmaali karaa caawimo weyn ee hawlaha qaab beddelidda. By file soo celiyaa ka mid foomka si kale, faylka si fudud loo ciyaaray karaa VLC Player. Iyada oo ku xidhan doorashada qaab faylka wax soo saarka, waxaad si fudud u bedeli karaan faylka in arrinta ma jiro waqti, iyo hesho file socda on Windows ama Mac.
Geedi socodka ah ee diinta ah ee faylka ku bilaabmayaa doorashada file ah oo aad diinta. Markaas doorashada nooca file saarka yahay in la sameeyo iyada oo hoos u soo dhaadhacay menu. Marka doorashada, waxaan ka heli kartaa menu diinta ah, oo kaliya dhinaca gacanta midigta hoose oo ka mid ah Wondershare Video Converter Ultimate interface. By gujinaya menu in, geeddi-socodka ah ee diinta ku soo bilowday iyo waqti, habka uu dhameystiray. Marka la dhameeyo, file si fudud ayaa lagu ciyaari karaa Media VLC ka Player.
Wondershare Waa aalad kama dambaysta ah, kuwaas oo dadka ka caawiya in dhammaan dhinacyada kala duwan ee diinta video ah oo ay arkeen kala duwan ee fursadaha of qaabab file, qalabka la oran karo waa mid ka mid ah ugu baahsan oo dhan ee ku sifayn isku mid ah.
Sidaas, haddii ay dhacdo, aad ayaa wajaheysa dhibaatooyin ka la File RTMP ku VLC Player aan ciyaaro, kaliya qaataan gargaar oo ka mid ah fursadaha kala duwan ay bixiyaan Wondershare Video Converter Ultimate ah, taas oo inta badan waxay u adeegtaa sida Kaaliyaha weyn VLC.
> Resource > VLC > Sida loo Play RTMP Faylal ay la VLC Media Player?